Tontolo_iainana · Oktobra, 2007 · Global Voices teny Malagasy
Tontolo_iainana · Oktobra, 2007
Tantara mikasika ny Tontolo_iainana tamin'ny Oktobra, 2007
31 Oktobra 2007
Misy vaovao tsara sy vaovao ratsy avy eto Kenya. Ny vaovao tsara aloha dia ny handravahana zavamaitso [zavamaniry] ny renivohitra Nairobi, ary ny vaovao ratsy kosa dia ny mety hakana tany na handavahana tany amin’ny toerana manodidina ny Tendrombohitra Kenya. Hojerentsika ao amin’ny GV tontolo iainana ny momba izany tantara...
Ghana : Vahaolana hoan'ny fifamoivoizana any Akra
Ghana 23 Oktobra 2007
Raha isan'ireo mihevitra ianao fa maro loatra ireo fifamoivoizana any Akra [Accra, renivohitr'i Ghana], ny mpiblaogy Emannuel Bensah dia manolotra ny heviny : « Let's use the bicycle! » « Andeha indray hampiasa bisikleta ! » Ndesanjo Macha
Tonizia 20 Oktobra 2007
Pop!Tech ho Iraisam-Pirenena sy ho amin’ny fiteny maro
Hevitra 18 Oktobra 2007
Efa tapaky ny volana oktobra sahady isika ary amin’ny toerana maro amin’ny ila-bolatany avaratra dia efa mivoaka tany amin’ny nampirimana azy amin’izay ny akanjo mafana ary efa mihintsana ny ravina manopy mavo sy mena. Fa izao koa ny fotoana hivorian’ireo mpandalina ny hay, ny mpampilatro na mpaneho antsary ny zavatra...
Karaiba 16 Oktobra 2007
Afrika Atsimo 12 Oktobra 2007